MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA EEYAHA GREYHOUND - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Eeyaha Greyhound
Nittany the Greyhound oo 8 jir ah oo xirtay xarig, jaakad iyo boot.
Liiska eeyaha Greyhound Mix brewed
Greyhound waa eey dheer oo caato ah. Madaxa waa dherer yahay oo cidhiidhi yahay, ballaadhan yahay dhegaha dhexdooda, oo leh masar duuban oo dhaadheer. Joogsi ma leh. Dhagaha yaryar ee ubax ayaa dib loo hayaa oo laalaabaa, oo waa la dhuuqsadaa markay faraxsan yihiin. Indhuhu waa midab madow. Qoorta oo waxoogaa fiiqan ayaa dheer. Lugaha ayaa dhaadheer iyadoo lugaha hore si toosan u toosan. Laabta way ballaadhan tahay oo qoto dheer tahay. Dabada dhaadheer oo xoogaa qalooca kor u socda. Koodhka gaaban, ee wanaagsan wuxuu ku yimaadaa midabbo oo dhan.
Greyhound waa geesinimo iyo daacadnimo. Caqli badan, dib-u-dhac leh, soo jiidasho iyo kalgacal leh, dabeecaddeeda inta badan waa la qiimeeyaa sababtoo ah dhaqankeeda dhowrsan ee shisheeyaha iyo xitaa sayidkiisa. Greyhounds waxay u nugul yihiin codka qofka mana dhageysan doono haddii ay dareemaan inay ka maskax adag yihiin milkiilahooda, hase yeeshee sidoo kale sifiican ugama jawaabi doonaan anshaxa adag. Milkiilayaashu waxay u baahan yihiin inay is dejiyaan, haddana leeyihiin hawo awood dabiici ah. Bulsho si fiican looga hortago xishoodka. Sida caadiga ah, waa kuwo jilicsan oo xitaa dabacsan - labadaba khadadka tartanka iyo khadadka muujinta. Inta badan Greyhounds waxay leeyihiin wado ugaarsi la hubo. Waa wax dabiici ah eeyahaani inay cayrsadaan wax kasta oo dhaqso u dhaqaaqa. Aad ayey u dhaqso badan yihiin qaarna way dili doonaan bisadaha iyo xayawaannada kale ee guryaha, inkasta oo tani aysan badnayn (kaliya 20% ka mid ah qowmiyadihii hore ayaa aad u 'doonaya' inay ceyrsadaan ugaarsiga si ay weligood uga nabad galaan xayawaannada yaryar). Qiyaastii 10% isla markiiba waa okay sababtoo ah dabeecad hoose, iyo inta hartay ayaa loo tababbari karaa inay baxaan bisadaha iyo kuwa kale xayawaanka yaryar guriga keligiis. Marar dhif ah ayey dhibaatooyinka kala kulmaan eeyaha kale waxayna caadi ahaan ku wanaagsan yihiin carruurta, in kasta oo aysan inta badan jeclayn ciyaarta qallafsan, mana noqon doonto dookh wanaagsan carruurta yaryar ee raadinaya qof ay wada ciyaaraan. Gudaha gudihiisa, eeyahaani waa kuwa deggan oo bulsheed heer ay xitaa loo qaadan karo caajis. Waxay si adag ula xiriiraan dadkooda, waxay leeyihiin adkeyn aad u weyn, mana cadaan badan. Khadadka bandhiga waxay u muuqdaan inay yihiin qaab jidheed ka duwan khadadka tartanka, badanaana waa la xakameeyaa. Khadadka tartanka waxaa loogu talagalay waxqabadka, laakiin badanaa wax soo saar wanaagsan ayaa ah inay yihiin saaxiibtinimo, eeyo baxa oo sameeya xayawaanka la jecel yahay markay maalmahoodii tartanka dhamaadeen . Greyhounds si gaar ah uma feejignaadaan. Khadadka bandhiga waxay u muuqdaan kuwo xoogaa culus oo loo kariyey dabeecad ahaan khadadka tartanka, kuwaas oo lagu koriyey xawaare. Si kastaba ha noqotee, khadadka tartanka ayaa sidoo kale sameeya xayawaanno cajiib ah. Waxaa jira boqolaal kooxo korsado ah oo ku baahsan Waqooyiga Ameerika, Yurub iyo Australia si loo dhigo kuwan, eeyaha jecel, markay jecel yihiin. Tartanka howlgabka Greyhounds badanaa kuma adka jabka guriga . Iyaguba waa hore sanduuq tababaran laga bilaabo wadada, sidaa darteed kuma qaadaneyso waqti dheer inay bartaan inaysan guriga 'tagin'. Greyhound wuxuu u baahan yahay xitaa xanaaq, dabacsan laakiin milkiile shirkad jecel yaa yaqaan sida loo sameeyo si joogto ah ula xiriiraan ah xeerarka guriga . Greyhound oo garanaya booskiisa xirmadiisa iyo waxa laga filayo waa Greyhound faraxsan.
Dhererka: Ragga 28 - 30 inji (71 - 76 cm) Dumarka 27 - 28 inji (68 - 71 cm)
Miisaanka: Ragga 65 - 80 rodol (29 - 36 kg) Dumarka 60 - 70 rodol (27- 31 kg)
Khadadka qaarkood way balaaranyihiin waxayna gaareen 90-ilaa-100 rodol (40 - 45 kg)
xadka collie iyo ey isku dhafka ah
Nooc u eg . Way fiicantahay inaad siiso iyaga 2 ama 3 cunto yar halkii aad kaweyn lahayd mid weyn. Waxay u nugul yihiin daroogada, oo ay ku jiraan sunta cayayaanka. Waxaa la yiraahdaa waxay sidoo kale u nugul yihiin hypothyroidism, si kastaba ha noqotee waxaa sidoo kale la rumeysan yahay in heerarka tayroodhka 'Greyhounds' ay dabiici ahaan ka hooseeyaan eeyaha badankood dad badanna ay ku ridaan daaweyn aan loo baahnayn oo loogu talagalay hypothyroidism - oo waxyeello badan u leh eeyga - ka dib markii lagu taliyay dhakhtarka xoolaha aan aqoon lahayn. Waxaa jira hal dariiqo oo kaliya oo si dhab ah loogu xaqiijiyo haddii cirridku dhab ahaantii leeyahay hypothyroidism, taasna waa in la sameeyo guntin dhammaystiran oo qanjirka 'thyroid State University'. Waxaa jira buug aad u fiican oo ay qortay Cynthia Branigan, 'Adopting the Racing Greyhound', oo cutub dhan ku leh.
Greyhound wuxuu ku fiicnaan doonaa guri dabaq ah haddii uu helo jimicsi ku filan. Waa hawl yar gudaha gudaha daarad yar ayaa sameyn doonta. Greyhounds waa u nugul yihiin qabowga laakiin waxay ku fiican yihiin cimilada qabow inta ay xiran yihiin jaakad ka baxsan. Ha u oggolaan eeygan inuu ka baxo xarigga illaa uu ku sugnaado meel aamin ah mooyee. Waxay leeyihiin dareen ceyrsan oo xoogan hadii ay ku arkaan xayawaan sida a bakayle waa laga yaabaa inay iska baxaan. Aad ayey u dhaqso badan yihiin ma awoodi doontid inaad qabsato.
Greyhounds oo loo haysto xayawaan ahaan waa inay lahaadaan fursado joogto ah oo ay si bilaash ah ugu ordaan dhulka bannaan ee aagga nabdoon, iyo sidoo kale maalin kasta oo dheer, kacsan socdo , halka eyga looga sameeyo ciribta cirif ama dhabarka qofka haya hogaanka. Maskaxda eyga hoggaamiyaha ayaa ku hoggaamiya jidka hoggaamiyahaasna wuxuu u baahan yahay inuu noqdo aadanaha. Greyhounds waxay jecel yihiin waxqabad joogto ah.
Cabbirka qashinka ayaa aad ugu kala duwan noocyadan. Laga soo bilaabo 1 ilaa 12 eeyo yaryar oo celcelis ahaan 8 ku dhashay hal qashin.
Jaakad siman, timo-gaaban ayaa aad u fudud in la xannaaneeyo. Si fudud ugu shanlee oo ku caday burush adag, iyo shaambo qallalan oo keliya markii loo baahdo. Noocani waa celcelis daadiya.
Noocan aad u qadiimiga ah waa eeyga ugu dhaqsaha badan adduunka wuxuuna gaari karaa xawaare ka badan 40 mayl saacaddii (65 km / h). Dhagxaanta Greyhound waxaa laga helay qabriyado kuyaala Masar oo taariikhdu ahayd 2900 B.C. Waxaa loo maleynayaa inay asal ahaan ka soo jeedaan Carabi Sloughi waxaana keenay Ingriiska ganacsato kahor 900 AD. Nooca waxaa markii ugu horreysay keenay Ameerika sahamiyayaal Isbaanish ah sanadihii 1500s. Waxay ahaayeen mid ka mid ah eeydii ugu horreysay ee abid lagu muujiyo show eyga. Qashin-qubka dabiiciga ah ee 'Greyhound' waa bakayle iyo bakayle, si kastaba ha noqotee waxaa sidoo kale loo adeegsaday in lagu ugaarsado cawsha, deerada, dawacooyinka iyo ugaadha duurjoogta ah. Xawaaraha eeyga oo ay weheliso aragtidiisa indha sarcaadku waxay ka caawisay inuu ku fiicnaado shaqadiisa. Eeyadu waxay awoodeen inay cayrsadaan oo ay qabtaan salaadda iyagoon joojin nasashada. Maanta waxaa jira laba nooc oo Greyhounds ah oo la soo saaray: Show khadadka, oo u dhigma jaangooyada qoran iyo khadadka tartanka, oo loo kobciyey xawaare. Ka dib markii uu ka fariistay xirfadda tartanka, eeyahaas badanaa waa la burburiyey. Iyada oo ay ku jiraan dadaallada heeganka ah ee Greyhound Rescue dhaqankan ayaa si weyn hoos ugu dhacay oo kuwa ugu xanaaq badan Greyhounds ayaa laga helaa guryo. Greyhound wuxuu AKC aqoonsaday 1885. Hibooyinka 'Greyhound' waxaa kamid ah ugaarsiga, aragtida, ilaalinta, tartanka, firfircoonida iyo sasabashada jihada.
Koonfurta, AKC Hound
Dadka waaweyn ee Greyhound
Xqisite Dynasty Ypsylon aka Lena, xushmad sawir Magda Kruszewska, Poland
XQqisite Dynasty Ypsylon aka Lena, qadarin sawir Magda Kruszewska, Poland
Snowy the Greyhound oo 2 sano jir ah— 'Snowy waa eygii hore ee orodka tartanka. Waxaa loo koriyay korsasho maxaa yeelay kuma guuleysan tartamadeeda.
Lexy dheddigga purebred Greyhound at 3 sano. Waxaa loo tababaray tartanka, laakiin waligeed ma tartamin. Waxaa laga korsaday milkiilaheeda hadda xarun badbaadin eey.
Eeg tusaalooyin badan oo Greyhound ah
Sawirada Greyhound 1
Si guul leh loo qaatay Eey Samatabbixin ah
Eeyaha Greyhound: Sawirada Guryaha La Uruurin Karo
sawirrada poodle chihuahua mix
Jack russell terrier iyo chihuahua iskudhaf
shaybaar madow jarmal isku dhafan
Boster Terrier oo lagu qasay chihuahua
isku darka chihuahua galbeed sare